nepalisahitya Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / nepalisahitya
यो सिउँडी फुल्ने देशमा
Tags: alert-news, kavita, nepalirachana, nepalisahitya, sahitya, tirthasangamrai
खबरडेक्स, ६ मंसिर । यो सिउँडी फुल्ने देशमा किन आउँछन् पर्वहरू ? हरेक दिन केही मर्छन् सपनाहरू हरेक दिन ब्युँझन्छन् रहरहरू समयको छुद्रो भीरमा किन फुल्छ टिप्न नसकिने गुराँस ? आजित मान्छेको मनले कसरी मनाओस् उत्सव जीवनको ? त्यसैले कतारमा… बाँकी अंश »
Tags: garima, kavita, madhupark, milanlimbu, nepalirachana, nepalisahitya, sahitya
खबरडेक्स, २५ आश्विन। अनिश्चित उदय – मिलन लिम्बू घमासान युद्धमा सुरक्षा कवज आन्जानमा थाहा नपाई फुट्नु पर्छ अनि मात्र तिम्रो उदय निश्चित छ । तर, अभागी तिमी ! जहिले नियोजनको शिकार कवज फुट्दैन अब तिम्रो उदय झनै अन्योलमा बिना कवज… बाँकी अंश »
Tags: @dahalram, alert-news, garima, katha, kumudini, kuntikikatha, madhupark, nepalisahitya, sahitya, suseli, suskera
खवरडेस्क, आश्विन १८ । कथाकी कुन्ती कथा सन्तान नहँदा दुःख हुन्छ भनेर कसैले भन्दा मानिसहरू श्यामराज र कुमुदिनीको उदाहरण दिने गर्दथे । छोराछोरी नभएर पनि यिनीहरूलाई कहिले पनि असन्तोष भएन । सधैं उज्याला थिए, सधैं खुशी थिए । जहिले पनि जहाँ पनि… बाँकी अंश »
गजल – ईशहाक हुसेन
Tags: garima, gazal, madhupark, nepalirachana, nepalisahitya, sahitya
खबरडेक्स, आश्विन १३ । गजल – ईशहाक हुसेन म त तस्वीर अधुरा भएछु काम नलाग्ने कुरा भएछु आमाकै काखमा लास जस्तो म अभागी टुहुरा भएछु नाम संजिवनी भए पनि म त मताउने सुरा भएछु प्रेरणास्रोत बन्न नसक्दा सपना कोहीको अधुरा भएछु… बाँकी अंश »
मेच – विश्वम्भर चन्चल
Tags: alert-news, nepalisahitya, suseli, suskeraharu
खबरडेक्स, आश्विन १३। मेच – विश्वम्भर चन्चल अफिसमा निकै गाइँगुइँ चल्न थालेको छ आपूm आपूmमा र सबै आश्चर्यचकित छन् वातावरणदेखि । “के हुन लाग्यो यो अचम्म !” सबैको मुखबाट यही सुनिन्छ । बूढो कारिन्दा रामशरण आएर भन्छ, “होइन हजूर, कतैको भूतसुत… बाँकी अंश »
Tags: alert-news, facebook, nepalisahitya, rachana, sahitya, suseli, suskera
खबरडेक्स, १२ असोज । फेसबूक भित्ता – रामकुमार पण्डित क्षेत्री “फेसबूक भित्तामा साह्रै राम्रो स्ट्याटस आ’को छ रे । यो स्ट्याटस राख्ने देशकै ठूलाका पनि ठूला हुन् रे । त्यसलाई मन पराउनेहरू लाख पुगिसके रे । प्रतिकृया लेख्ने चाहिँ आधालाख… बाँकी अंश »
शनै शनै रेगिस्तानहरू
Tags: alert-news, garima, kabita, kavita, lekharachana, madhupark, nepalisahitya, rachana, sahitya
खबरडेक्स, १२ असोज । शनै शनै रेगिस्तानहरू – महेश प्रसाईं आजकल तिम्रो तस्विरमा कुनै कोमलता देख्तिनँ, भद्दापन भएपनि हुन्थ्यो, कुन्नि कस्तो सुडौलको एकएक अनर्थमा क्रूरता र कलुषितताहरू कपट र अनर्गलहरू भित्रैदेखि मडारिरहन्छन्, बिहानको सुन्दर लिवासमा आरती सुमधुर सुनिन्थ्यो शश्य श्यामल… बाँकी अंश »
गजल – कल्पना तामाङ प्रकृति
Tags: gajal, nepalisahitya, rachana, sahitya
खबरडेक्स, ११ असोज । – कल्पना तामाङ प्रकृति हानीको ताली ,बज्छ एकपल्ट जवानीको ताली, बज्छ एकपल्ट केही नयाँ त, केही पुराना कहानीको ताली ,बज्छ एकपल्ट बुढेसकालमा सहारा, लाग्छ लाखापाखा मानहानीको ताली, बज्छ एकपल्ट यादहरु बल्झिएर, अल्झाउछ धड्कन निशानीको ताली ,बज्छ… बाँकी अंश »